घर फर्कने पैसा पठाइदिनु भनेको छोरो हराएपछि
Mon, May 28, 2018 | 03:17:38 NST
Sunday, Apr 15, 2018
16:05 PM (1 month ago)
रमा मगर/उदयपुर ।
वैशाख २ – उदयपुरको भलायडाँडा घ्याम्पेमा वरिपरी जङ्गलले घेरिएको सानो बस्ती । यो गाउँका मानिस जागिरभन्दा बढी कृषिमै रमाउँछन् । खेतिपातीमा रमाउन नसकेकाहरु मनका कमाउने र थाप्लोमा साहुको ऋण बोकेर विदेश लाग्छन् ।
६० वर्षका मानबहादुर अधिकारीको घर पनि यही बस्तीमा पर्छ । गाउँमा चलिएको चलन । मानबहादुरले नआँटेको मुग्लान जाने बाटो छोराले तताए । छोराले तताएको यो बाटोले मानबहादुरको घरव्यवहार उकासेन । मलेसियामै भासिए उहाँका छोरा धनबहादुर ।
‘समस्यामा परेको बेला बुवाले पैसा पठाएन भनेर रिसायो कि जस्तो पनि लाग्छ,’ मानबहादुरलाई छोराले मलेसिया पुगेको एक महिना नबित्दै घर फकिर्नन भन्दै पैसा पठाइदिनु भन्नुभएको थियो ।
‘यहाँ कम्पनी राम्रो परेन, घर आउछु पैसा पठाइदिनु भन्थ्यो, उसले जानेबेलाको ऋण त छँदैथियो फेरि मैले पैसा पठाउन सकिन, त्यसैले रिसायो जस्तो छ,’ मानबहादुरले अनुमान लगाउनुभयो ।
२०७१ जेठमा मलेसिया जानुभएको थियो धनबहादुर । छोरालाई मलेसिया उड्उनका लागि एक लाख २० हजार रुपैयाँ साहुको ऋण काढ्नु प¥यो मानबहादुरले । त्यसमाथि एक महिना पनि नबित्दै छोराले पैसा माग्दा उहाँले पठाउन सक्नुभएन ।
पैसा कमाएर ल्याउछु भन्दै सात समुन्द्र पारी पुगेको छोरोलाई पैसाकै कारण गुमाउनै पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले धनबहादुरको भोक निन्द्रा हराएको छ ।
धनबहादुर १९ वर्षको उमेरमै मलेसिया लाग्नुभएको थियो । खेतीकिसानीले घरव्यवहार चलाउन धौ धौ भएपछि मानबहादुले ऋण काढेरै भएपनि हुर्केको छोरालाई परदेश पठाउनुभयो । काम कस्तो थियो, कम्पनी कस्तो थियो त उहाँ जान्नुहुन्न तर छोराले काम राम्रो भएन भनेकाले विदेशमा समस्या पर्‍यो भन्ने लाग्छ उहाँलाई ।
मानबहादुरले छोराको नम्बरमा धेरै पटक फोन गर्नुभयो । तर न त यताको प्रयास सफल भयो न त धनबहादुरको फोन आयो । ‘फोन गरिहाल्छ कि भनेर मोवाइल बोकेरै हिड्छु, टावर आउने ठाउँमा राख्छु तर गर्दैन, यतिलामो समयसम्म रिसाउने बानी पनि थिएन,’ मानबहादुर लामो सास तान्नुहुन्छ ।
छोराको फोन आउन छाडेपछि मानबहादुरले पठाउने एजेन्ट दिपेश खत्रीलाई छोराको खोजी गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । आकर्षण इन्टरनेशनल प्रालिमा पनि छोरो सम्पर्कविहीन भएको भन्दै खोजिदिन गुहार गर्नुभयो । ‘सबैलाई भने मेरो छोरो हरायो भनेर तर कसैले वास्ता गरेनन्, म कहाँ खोजु छोरालाई, मसँग न कुनै कागजपत्र छ न त फोटो नै,’ मानबहादुर गुनासो गर्नुहुन्छ ।
धनबहादुरसँगै मलेसिया गएका साथी भीम अधिकारी नेपाल फर्किसक्नुभयो । उहाँका अनुसार, धनबहादुर कम्पनी छाडेर भग्नुभएको थियो । तर कहाँ जानुभयो कसैलाई पनि जानकारी छैन ।
मानबहादुरलाई छोरासँग फोन नम्बर नभएर फोन नगरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । ‘बावु तिमी आउ, नभएपनि हामीलाई फोन गर,’ मानबहादुर छोरा खोजििदन सबैलाई आग्रह पनि गर्नुहुन्छ ।
छोरासँग फोन नम्बर नगएको भए उहाँले ९८६२८१७७३७, ९८४२९०२३१५ नम्बरमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
मलेसियाको छुट्टी सकियो, बंगुरपालन थालेका रामबहादुर फर्केनन्
आफूले काम गर्ने कम्पनीमा नै फेरि जाने भएर उहाँ छुट्टी मात्रै लिएर नेपाल आउनु भएको थियो । मलेसियाको बसाई, काम र कमाई ठिकठिकै भएकाले उहाँले विदेश नै जाने योजना बनाउनु भएको थियो । तर रामबहादुरको मलेसिया यात्रा बंगुरपालनले छेकिदियो ।
ओमानको सललामा सामुन्द्रिक तुफानमा एकको ज्यान गयो, नेपाली सुरक्षित
उमाकान्त पाण्डे/उज्यालो । युएई, जेठ १२– ओमानको सललामा साइक्लोन मेकुनु नामक सामुद्रिक तुफानका कारण एक जनाको ज्यान गएको छ । सयौं प्रभावित भएका छन ।
हिजोआज दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीमाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालीले नेपालीमाथि गरेको अमानवीय दुव्र्यवहारको चर्चा एकाएक चुलिएको छ ।
पासपोर्टसँगै हराएका तुलमायाका सपना
त्यसैले उहाँ हराएको पासपोर्ट बनाउन सदरमुकाम आउनुभयो । हराएको पासपोर्ट त केही समयमा बन्छ तर विदेश गएर पूरा गर्न बाँकी राखेका काम भने बन्ला कि नबन्ला ?
मलेसियाको छुट्टी सकियो, बंगुरपालन थालेका रामबहादुर फर्केनन् आफूले काम गर्ने कम्पनीमा नै फेरि जाने भएर उहाँ छुट्टी मात्रै लिएर नेपाल आउनु भएको थियो । मलेसियाको बसाई, काम र कमाई ठिकठिकै भएकाले उहाँले विदेश नै जाने योजना बनाउनु भएको थियो । तर रामबहादुरको मलेसिया यात्रा बंगुरपालनले छेकिदियो ।
ओमानको सललामा सामुन्द्रिक तुफानमा एकको ज्यान गयो, नेपाली सुरक्षित उमाकान्त पाण्डे/उज्यालो । युएई, जेठ १२– ओमानको सललामा साइक्लोन मेकुनु नामक सामुद्रिक तुफानका कारण एक जनाको ज्यान गएको छ । सयौं प्रभावित भएका छन ।
​कोरियामा धन देखेर मन हराएकाहरु हिजोआज दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीमाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालीले नेपालीमाथि गरेको अमानवीय दुव्र्यवहारको चर्चा एकाएक चुलिएको छ ।
पासपोर्टसँगै हराएका तुलमायाका सपना त्यसैले उहाँ हराएको पासपोर्ट बनाउन सदरमुकाम आउनुभयो । हराएको पासपोर्ट त केही समयमा बन्छ तर विदेश गएर पूरा गर्न बाँकी राखेका काम भने बन्ला कि नबन्ला ?
​वैदेशिक रोजगारीले ल्याउने समस्यामा गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड
सिर्जना बस्नेत/रामेछाप । जेठ १३ – आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र रामेछापको साधारणसभामा बोल्ने वक्ताले वैदेशिक रोजगारीका उत्पन्न समस्याप्रति सरोकारवाला सबै गम्भिर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
अल्लोबाट आत्मनिर्भर बन्दै पर्वतका महिला
पर्वत, जेठ १३ – लेकाली सामुदायिक वनका चाल्ने सिस्नो (अल्लो) प्रशोधन गरेर यहाँका महिलाले आय आर्जन गर्न थालेका छन् ।
​रियाल, रिंगिट र दिर्हामको मूल्य घट्यो, कोरियन वन र दिनार पनि कमजोर
काठमाडौं, जेठ १३ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ८४ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ रहेको छ ।
​नेपालीका लागि मलेसियाको रोजगारी तत्काललाई बन्द
काठमाडौं, जेठ १२ – सरकारले मलेसिया जाने कामदाबाट भइरहेको ठगी गर्ने संयन्त्र हटाउन पूर्व श्रम स्वीकृती रोक्दै रोजगारीका लागि मलेसिया जान बन्द गरेको छ ।
मेरो कथा मेरो भोगाई थप सामाग्रीहरु
​परदेशीका श्रीमतीलाई दोषी देख्ने कहिलेसम्म ? एक महिलालाई कुटपिट भयो । घरबाट निकालियो । दुव्र्यवहार भयो । घरमा सम्मान पाइनन् भन्ने सुन्नुभयो भने तपाईं के सोच्नुहुन्छ ? धेरैलाई लाग्न सक्छ महिला नै गलत हुन् । अझ अहिले सामाजिक सञ्जालमा श्रीमान विदेशमा यता श्रीमतीले रमाइलो गरिन, दोस्रो बिहे गर्ने बढे भन्ने जस्ता अनेक समाचारका शिर्षक भेटिन्छन् । महिलाहरुकै कारणले समस्या निम्तियो, उनीहरु त्यस्तै हुन्छन् भन्ने सोच आज हैन समाजमा हिजैदेखिको हो । श्रीमान् परदेश गएपछी श्रीमतीलाइ हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइहाल्छ । जाने बुझेका मान्छेले नै फर... पुरा पढ्नुहोस
छोरा विदेश पठाए साहु धनी, गाउँघरमै दुःख गरे आफैं धनी मेरा चार जना छोराछोरी छन् । छोरी अहिले १० कक्षामा पढ्छिन् । तीन छोराले चाहिँ पढ्न भन्दा पनि कमाउन तिर ध्यान दिए । त्यसैले ऋण काढेर तीन जनालाई नै विदेश पठाएँ । छोरा मेरा तर उनीहरुले विदेशमा गरेकाे दु:खले साहु धनी भए । सय कडा तीनको ऋण तिर्दा तिर्दै छोराहरु फर्किने बेला भैहाल्ने । घर त जस्ताको तस्तै । विदेशको कमाइ खहरे खोलाको भेल जस्तै हुने रहेछ । केही समयअघि हाम्रो गाउँमा एउटा कक्षा हुने भयो । बुढेसकालमा हामीजस्तालाई पढाउने कक्षा कस्तो होला भन्ने लाग्यो सुरुमा सुन्दा त । छोराहरुलाई... पुरा पढ्नुहोस
कार्यक्रम देश परदेशको अंक ३०८ वित्तिय साक्षरता कक्षापछि फेरिएका परदेशीका परिवारमा केन्द्रित छ । परदे...
कोरियन साहुको किचकिच, काम गाह्रो, भनेको समयमा कम्पनी परिवर्तन गर्न नसकिने आदि कोरियाको मुख्य समस्या हो। बाँकी अरू त सबै ठीकै छ। काम अनुसारको तलव, हावापानी, बाटो घाटो, बसाई, ईन्टरनेट सुविधा सबै राम्रो छ।
खासै त समस्या छैन तर यसो जानेको कुरो गरुम् भनेर मेरो अनुभव यस्तो छः -भाषाको समस्या, -भनेको काम नभइ अर्को काममा लगाउने, -कम्पनी राम्रो पर्‍यो भने ठिकै हुन्छ खराब पर्‍यो भने बर्बाद नै हुन्छ, -तोकेको सेलरी भन्दा कम, -यदि पहिलो चोटि विदेश हिड्नु हुदैछ भने अलिकती भए पनि भाषा जान्नुहोस्